Ogaden News Agency (ONA) – U yeedha Itobiya; Jinni ninkii keenaa bixiyee
U yeedha Itobiya; Jinni ninkii keenaa bixiyee
Posted by ONA Admin	/ July 12, 2012
Waxaa maah-maahdan i soo xusuusiyay teleefoon uu nin reer Baydhaba ah u diray walaashii oo dagan magaalada Buur-hakabo oo 90Km u jirta Baydhabo. Waxay ii sheegtay buu yidhi walaashay inay ciidamada Itobiya hub laxaad leh u dhigaan Shabaabka meel ku taala Buur-habakaba, ka dibna ay yimaadaan oy halkaa ka qaataan. Aad ayuu ula yaabanaa arintaa ninka ii sheega hayay hasa ahaatee dadka yaqaana ee hoos ahaan ula socda siyaasadda Itobiya lama yaabana arintaa, sababtoo ah Itobiya waxaa u muuqda Somaliya oo gacanteeda ku soo dhacaysa, waxayna ku sharciyaysaa faragalinta iyo joogitaan-keeda gudaha Somaliya waa la dagaalanka argagixisada caalamiga ah oo ururka Al-Shabaab uu ka midka yahay. Hadday Shabaabka meesha ka baxaan, Itobiya waxaa ka lumaya qodobkaa ay ku sharciyayso dhex joogeeda Somaliya, sidaa darteed Itobiya iyo Shabaabka waxaa ka dhexeeya xidhiidh maslaxo oo midna uusan ogolayn midka kale inuu ka maqnaado goobta.
Somalida ayaa waxay aaminsanaayeen inay jiraan dad ku shaqaysta Jinka oo qofkay doonaan ku dira. Sidaa adrteed ayay marka qof laga saari waayo jiniga ku jira ay odhan jireen qofkii u keenay jinka ku jira umbaa bixin karee hala doono. Itobiya waa inay keento marwalba jinni madax adag oo aan la saari karin si iyada loogu yeedho.
Waxaa laga yaabaa inay yidhaahdeen dadka qaarkood, dhalinayaradan la baxay Shabaab Al-mujaahidiin waxay soo baxeen markii la jabiyay maxaakimta, Itobiyana tan iyo markii la burburiyay qarankii Somlaiyeed way walaaqaysay arimaha Somaliya, taasoo ka dhigan Itobiya marwalba Somaliya way ku dhex jirtaa Shabaabka hajoogaan ama yaanay joogine. Laakiin hadafka (Itobiya) iyo wadada (ay u sii marayso) ayay dadka sidaa u fikiraya isku khaldayaan. Hadafka Itobiya waa inay Somaliya si toos ah ama si dadban ugu dhex jirto una xukunto. Wadada ay u maraysana kolba heerka uu joogo ayay ula dhaqantaa. Inta badanna iyada ayaaba samaysata wadada ay mareyso siday ku gaadhi lahayd hadafka ay ka leedahay Somaliya. Haday dhacdo in la hirgaliyo arin (waddo) aanay ogayn waxay ku dadaali Itobiya inay marka hore dhex gasho ka dibna ay kala daadiso oy dib isugu hagaajiso si waafqasan danaheeda.
Marar badan ayay dhacday. Waxaan ogayn xukuumadii lagu soo dhisay Jabuuti ee Cabdiqaasim Salaad madaxweynaha loogu doortay. Itobiya kama horimaanin markii ugu horeysay oo way taageertay. Waxay ku kicisay canaasirteedii iyadoo iska dhigaysa inay la socoto Cabdiqaasim oo kolba la-talinaysa ilaa ugu dambayntii ay kala daadisay. Waxaa kaloo dhacda inay maamul meel ka dhisto ama Xukuumad Ku-Meelgaadh lagu magacaabo ay wax ka dhisto, oo marka ay muddo ku shaqaysato oo danihii ay lahayd ay ugu sii dhawaato ay kala daadiso si mid kale oo ka liidata oo uga dhaga nugul xukuumadii hore ay u dhisto markale. Hadafka Itobiya waa mid aan isbadalin oo waa inay Somaliya gabi ahaanba u qaadato ama haddii loo diido ay uga dhigto dawlad magac-u-yaal ah.
Waxaana u suurtagaliyay Itobiya inay ku guulaysato qorshaheeda arimaha soo socda;
1- Hadafka Itobiya iyo cadawaadda ay u qabto cunsurka Somali oo aan waxba iska badalin tan iyo dagaalkii imaam Axmad Gurey.
2- Darisnimada (Juquraafiga) oo u saamaxaya inay si dhaqsa leh u soo gasho ugana baxdo.
3- Qabyaaladda Somalida oo u saamaxaya inay kala gadato oy u samayso koox walba maslaxad gooni ah oon ahayn mid qawmi ah.
4- Aqoondarida Somlaida ka haysata taariikhda iyo dhaqanka qawmiyadaha Itobiya ee dariska ay yihiin looltankana uu ka dhexeeyay mudada fog.
5- Diinta masiixiga oy ku shukaanasto quwadaha caalamka ku leh awooda.
6- Itobiya oo kaga horeysa Somalida fahamka siyaasadaha caalamka.
Waxaa la odhan karaa ilaa hadda guul ayay joogtaa Itobiya, sababtoo ah waxay sharciyaysatay inuusan ka hirgali karin Somaliya wax aanay ogolayn Itobiya, sidoo kale waxaa ka dhaadhicisay siyaasigii Somali ah ee raba inuu mansab ka qabto inuu u gurguurto Itobiya.
Ugu dambayntii sidee looga bixi karaa marxaladdan? Ma sahlana, sababtoo ah 20kii sanee la soo dhaafay Itobiya waxay ka qoratay Somaliya jawaasiis badan oo u shaqeeya Itobiya oo diyaar u ah inay ka hortagaan fikrad kasta oo ka hor-imanay danaha Itobiya ay ka leedahay Somaliya. Taasoo jirta ayaa loo baahan yahay in la helo koox/halyay wadaniyiin ah oo diyaar u ah inay u dagaalamaan soo celintii qaranimadii Somaliyeed iyo sharaftii umadda Somaliyeed. Inuu midaa dhiig ku daato ayaa ka aakhira iyo aduunba uga sharaf badan in dhiig Somali lagu daadiyo mansab beenaad aan jirin oo shilimaadka lagu qaadanayo aan dhaafsiisnayn.